“Heshiis waliba oo kasoo baxa Shirka Dhuusamareeb waa in dib…
Xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo kamid ah Xildhibaanada Golaha shacabka oo la hadlay Axadle waxa uu sheegay in kulamada ka socda Magaalada Dhuusamareeb iyo qorshaha Doorashada dalka iyo awoodda Golaha uu katirsan yahay ee ansixiyay xeerarka loo marayo.
Jindi ayaa sheegay in natiijo waliba oo kasoo baxda Shirka Hogamiyayaasha Heer federaal iyo Heer Dowlad Goboleed la doonayo in dib loogu soo celiyo Golaha Shacabka BFS oo sal u ah Doorashada dalka.
Xildhibaan Cabdirasaaq Jindi ayaa sheegay in Doorashada ay Qabsoomi karto Hadii madaxda ay wadatashi dhab sameeyaan, isla markaana si dastuuri ah isaga kaashadaan ka gudbidda caqabadaha ku horgudban.
“Haddii daacad la yahay waa fududaanaa Shirka in uu ku qabsoomo si degen kuna soo dhamaado is afgarad, dastuuriyan Hogamiyayaasha Xukumadda awood ayuu siinayaa, halka Dowlad Goboleedyada talooyin aan laga maarmin ay leeyihiin” ayuu yiri Xildhibaan Jindi.
Xildhibaan Cabdirisaaq ayaa Hogamiyayaasha DFS ku eedeeyay in Doorashada Dadweyne ay shaaciyeen in dalka ay ka dhaceyso horay uga gaabiyeen, maadaama dadaalka lagu qabanayo laga doonayay in kol hore sameeyaan.
Geesta kale Xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi ayaa sheegay in Waxyaabaha ku aadan Bilaha Farsamada ee Doorashada raaceysa aan la diidaneyn Balse la diidan yahay in Muddo Korarsi ay dhacdo.
Xildhibaan jindi ayaa meesha kama uusan saarin baahida awood qaybsiga Beelaha in lagu saleeyo doorashada, maadaama muddo dheer Hay’adaha Xukumadda si ay u kala sareeyaan loogu qaybsanayo.
“Bil, labo iyo Saddex wax dhib ah malahan oo waa lagu dari karaa, balse caqabadda la diidan yahay waa in shuruud laga dhigo qabashada doroashado dadweyne oo aan suuragal noqoneyn, iyaga oo la diidan yahay Doorasho Dadban” ayuu sii raaciyay Xildhibaan Jindi.
Kulamada Dhuusomareeb ka socda waxa a sal u yihiin fadhiga Hogamiyayaasha Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed ee looga doodayo Qabsoomidda Doorashada dalka, xalinta Khilaafaadka iyo ka gudubka caqabadaha Siyaasadeed ee taagan.